Fahamaizana tanana :: Trano sivy amby roapolo ravan’ ny afo nampirehetin’ny zazalahy iray • AoRaha
Fahamaizana tanana Trano sivy amby roapolo ravan’ ny afo nampirehetin’ny zazalahy iray
Saika lasa lavenona ny tanànan’i Malalia any Iaritsena, distrikan’Ambalavao, noho ny firehetana niseho, afak’omaly alina. Fantatra fa afo nampirehetin’ny zazalahy tao amina trano iray no niitatra ka nandrava trano sivy amby roapolo tafo. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy sy ny olona naratra.
“Mifanakaiky ny ankamaroan’ny trano eo an-tanàna. Mafy ihany koa ny fitsokan’ny rivotra, tamin’io fotoana io, ka nampitatra haingana ny afo. Nisy ihany ny trano vitsivitsy voavonjy”, araka ny fitantaran’ny mponina any an-toerana.
Tokantrano iraika amby telopolo no mipetraka amin’ ireo trano sivy amby roapolo. Tsy latsaky ny telonjato ireo tra-boina. Trano lehibe misy rihana, mitafo bozaka, ny ankamaroan’ireo may. Tsy nisy avotra ny entana tao anatiny. Tonga nijery an’ireo niharam-boina tany antoerana ny solombavambahoakan’Ambalavao, omaly, sady nanolotra fanampiana toy ny vary, menaka sy ronono, koveta sy zinga.
Fanakorontanana sy asan-jiolahy :: Nopotehina teny Langaina ireo grenady sy basy vita tanana